यस्तै विरोधमा भईरहेको बेला नेपालको आकाश अर्थात् अछामको आकाशमा भारतले दर्जनौ जेट विमान उडाइएका छन् । मंगलबार साँझ अछामको आकाशमा लस्करै विमान उडिरहेको देखेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन् । केही प्रत्यक्षदर्शीहरुले ३७ जेट विमानहरु लस्करै उडेको देखेपछी आफुहरु त्रसित भएको बताएका छन् । आकाशमा विमान लस्करै उडेको प्रहरीले पनि देखेका थिए । इकालका प्रहरी कार्यालय विनायका असई लक्ष्मण बिकले पनि आकाशमा साँझतिर रकेट जस्तै देखिने गरी लस्करै उडेको बताए । बिकले भने, ”हाम्रा केटाहरुले आकाशमा लस्करै रकेटजस्तै गरी उडेका देखेका थिए ।” उनले रकेटको जति गति नभएको बताए । आफूहरुले माथि जानकारी गराइरहेको भन्दै पछि कुरा गराैला भनेर फोन राखेका थिए । लिपुलेक-कालापानीमाथिको अतिक्रमणलाई लिएर अछाममा पनि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला पनि जलाइएको थियो । त्यसैगरी नेकपा कार्यकर्ताहरुले भारतीय नक्सा पनि जलाइएको थियो । सीमा मिचिएको विषयमा विरोध भएकोले भारतले सुदूरपश्चिममा हवाई गस्ती गरेको अनुमान गरिएको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने यसबारे केही बताएको छैन । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पूर्वअछामबाट देखिएका विमानहरु लस्करै पूर्वअछाम पुगेर उत्तर मोडेर फर्किएका छन् । यसैगरी भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा दिनहुँजसो हेलिकप्टरबाटै निरीक्षण गर्छ । भारतीय वायुसेना र उच्च सैन्य अधिकारीहरु यो अतिक्रमित क्षेत्र नियमित पुग्ने गरेका छन् ।
यतिमात्रै होइन नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय पक्षले सुरक्षा फौज नै बसाएको छ । पछिल्लो समय अतिक्रमित क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी र हवाई युद्धकै तयारी भइरहेझैँ अनुभूति दिन्छ । तर नेपालले आफ्नै भूमिमा पनि उपस्थिति भने देखाउन सकेको छैन । कालापानी क्षेत्रमा भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पोलिस(आईटीबीपी)को सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरिएको जानकारी यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । पछिल्लो समय भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी र हवाई युद्धको तयारी पनि देखिन्छ ।
कालापानी र सुस्तामा सीमा समस्या छ भनेर दुबै देशले स्वीकार गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले भने, ‘हामी एक इन्च जमिन छोड्न पनि सक्दैनौं, अरुको एक इन्च जमिन पनि चाहिएन । यही मान्यतामा उभिने हो ।’ तर यस विषयमा उत्तेजना वा भ्रम फैलाएर समस्या सामाधान हुने उनले बताए । अन्तराष्ट्रिय समितिले सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने भन्दै उनले भने, कुरा मिलेन भने अन्तराष्ट्रियकरण अहिले भन्न हुँदैन । त्यसले हामीलाई …. । भएन भने के गर्ने त्यतिबेला सोचौंला नि ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : नेपालका सिमामा यसरी ढलेका छन जङ्गे पिल्लर ! याे समाचार सिंहदरबारसम्म पुर्याउन सेयर गरौँ
काठमाडौँ । नेपाल भारत सीमामा जङ्गे सीमाखम्बा ढलेका छन । नेपालको तर्फबाट ती खम्बा उठाउने र संरक्षण गर्नेमा ध्यान नपुगेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सीमाविद्हरुले यसको आवाज उठाइरहेका छन ।
कपिलवस्तु ठिकुरापुरस्थित चिरई खोलको बाढीले बगाएको ५७८ / ७ को मूल सीमा खम्बा ।
ढल्केको जंगे खम्बा नं. ३३७ सर्लाही बलरा गाउ‘पालिका–४ नयॉटोला फूलवरिया गाउको हो ।